Nke a bụ otu Samsung nwere ike isi kwụsị nsogbu ihuenyo ihuenyo Galaxy Androidsis
Nke a bụ otu Samsung nwere ike isi kwụsị nsogbu Galaxy Fold screen
Samsung nwere oke agụụ na ọdịnihu Fold Galaxy, ekwentị mbu nke ụlọ ọrụ a na -apịaji, emechara kpughee ọnwa ole na ole gara aga ka ọ nọsịrị mmepe ruo ọtụtụ afọ.
Agbanyeghị, naanị ụbọchị ole na ole tupu mmalite ekwentị ahụ, ụlọ ọrụ ahụ yigharịrị ahịa nke ekwentị Galaxy Fold, dabere na nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ mbụ gbasara ngwa gbasara ekwentị nsogbu ihuenyo. Mana Samsung na -arụ ọrụ ugbu a idozi ha.
N'oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ kwuru nke ahụ A ga -ekwupụta ọkwa ọhụrụ nke Galaxy Fold smartphone n'oge adịghị anya, nke na -enyocha ngwa ahụ nke ọma. Agbanyeghị na o kwuru na ọ ga -edozi okwu ndị ahụ, o kwupụtaghị etu o siri chọọ ime ya. (Tụlee: Galaxy Fold vs Huawei Mate X: echiche abụọ dị iche maka otu nzube ahụ)
A ọhụrụ akụkọ si Yonhap News na-ekwu na onye nrụpụta ahụ na -ezube itinye akwa mkpuchi nchekwa n'ahụ. Nke a ga -enyere aka igbochi ndị ọrụ ihichapụ ya, nke ụfọdụ ndị ọrụ mere ka ha weere ya dị ka ihe ngebichi ihuenyo. Na mgbakwunye, ọ gbakwụnyere na Samsung ga -egbochi oghere dị na elu na ala nke mgbachi ahụ iji gbochie irighiri ihe na -emebi ihuenyo mpịachi ekwentị.
Dị ka ụfọdụ leaked akụkọ, Samsung na -anwale ama na netwọkụ Korea. Akụkọ ahụ gbakwụnyere na Samsung na -atụ anya ịmalite Galaxy Fold na June, mana ekwenyebeghị ya na ụlọ ọrụ nwere ike ịgbanwe usoro mmalite.
Banyere nkọwapụta ihuenyo, ka anyị cheta nke ahụ Galaxy Fold nwere ihe ngosi 7.3-inch Infinity Flex nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,152 x 1,536.. Na ọnọdụ a, ịnwere ike iji ngwa atọ n'otu oge, ihe Samsung kpọrọ 'Multitasking atọ'.
Ihe ndị a bụ mgbanwe emere na Fold Galaxy
Mgbe apịaji na ọnọdụ ekwentị, ọ na-enye ihuenyo 4.6-inch nwere mkpebi FHD nke pikselụ 1,960 x 840. Ọ na -abịa na njirimara akpọrọ 'ịga n'ihu ngwa', nke na -edozigharị ngwa na -akpaghị aka mgbe ị na -atụgharị ihuenyo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ otu Samsung nwere ike isi kwụsị nsogbu Galaxy Fold screen
Oge 7 na-abịa PUBG Mobile nwere Ntutu, Dedicated Middle East Servers, na More